Baarlamaanka Norway oo diiday in 4-jirkan xanuunsan Norway loo soo qaado. - NorSom News
Baarlamaanka Norway oo diiday in 4-jirkan xanuunsan Norway loo soo qaado.
Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS
Baarlamaanka Norway ayaa jimcihii lasoo dhaafay cod u qaaday in Norway loo soo qaado 4 sano jir Norwiiji ah oo xanuunsan, ayna dhaleen hooyo iyo aabe Norway ka tagay, kuna biiray Daacish.
Wiilkan 4 sano jirka ah oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo, kuna sugan xeryaha qoxootiga Siiriya ayaa waxaa dhalay hooyo iyo aabe heysta dhalashada Norway, kana wada tirsanaa kooxda Daacish ee burburtay.
Hooyada dhashay cunugaas yar oo ku sugan xeryaha qoxootiga ayaa horey u codsaday in la badbaadiyo wiilkeeda oo xaaladiisa caafimaad ay kasii dareyso. Waxeyna hooyadan sidoo kale heysataa gabar kale oo wiilka xanuunsan la dhalatay.
Xisbiga MDG ayaa baarlamaanka Norway u gudbiyay mooshin codsi ah oo lagu dalbanayo in wiilkaas Norway loo soo qaado, laguna daaweeyo. Waxeyna codsadeen in xukuumada lagu cadaadiyo arintaas.
Baarlamaanka Norway ayaa jimcihii cod aqlabiyad xoogan leh ku diiday in wiilkaas Norway loo soo qaado. Waxaana mooshinkaas diiday xisbiyada Ap, Krf, Venstre, Sp, Frp iyo Høyre.
Xisbiyada MDG(oo mooshinka keenay), Rødt iyo Sv ayaana noqday sadexda xisbi ah ee kali ah ee u codeeyay in afar sano jirkaas xanuunsan Norway loo soo qaado.
Waxaa xusid mudan in horey ay dowlada Norway usoo jeedisay in wiilka xanuunsan kaligiis loo soo qaado Norway, isaga oo hooyadiis aysan la socon. Balse hooyada ayaa arintaas ku gacan seyrtay, codsadeyna in qoyskeeda oo dhameystiran lasoo wada badbaadiyo.
Xigasho/kilde: Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne
Previous articleSweden: Booliskii dilay wiilkan xanuunsan oo lagu waayay wax danbi ah.
Next article(Xog): Muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in masaajidka Towfiiq laga goosto taageerada dhaqaale ee dowlada.
Ayaan Xirsi Cali oo weerar ku qaaday Ilhaan Cumar.
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (25) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)